Samsung ရဲ့ နောက်ထပ် Foldable ဖုန်းသုံးလုံးကိုတွေ့လာရဦးမှာလား?? — Anycall Mobile
Samsung ရဲ့ နောက်ထပ် Foldable ဖုန်းသုံးလုံးကိုတွေ့လာရဦးမှာလား??
By liam August 30, 2020 1 Min Read
၂၀၂၀ အစောပိုင်းလောက်တုန်းက Samsung အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Foldable Smartphone Lineup ကို တိုးချဲ့ဖို့ပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ၂၀၂၀ ဖေဖော်ဝါရီအရောက်မှာတော့ Galaxy Z Flip ကို ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ August ၅ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ Galaxy Unpacked Event မှာလည်း Samsung အနေနဲ့ Galaxy Z Fold2ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Galaxy Z Fold2ကတော့ ဈေးကွက်ထဲကိုရောက်ရှိလာခြင်းမရှိသေးပါဘူး။
Fold2ထွက်လာပြီးနောက်မှာ Samsung အနေနဲ့ Galaxy Z Fold Lite ၊ Galaxy Z Fold3 နဲ့ Galaxy Z Fold S တို့ကိုထုတ်ဖို့ရှိနေတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါပြီ။ ပထမဆုံး Galaxy Z Fold Lite ကတော့ ဈေးပိုသက်သာတဲ့ Foldable ဖုန်းအနေနဲ့ ထွက်လာနိုင်တယ်လို့ @hwangmh01 က Twitter မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖုန်းမှာ Galaxy Z Flip နဲ့ Galaxy Z Fold2 တို့မှာသုံးထားတဲ့ UTG (Ultra Thin Glass) အစား CPI (Colorless Polyimide) သုံးပေးလာမယ်လို့ သိရပါတယ်။
CPI-Clad Display တွေဟာ UTG လို ခိုင်ခန့်မှုသိပ်မရှိတာမို့လို့ ဖုန်း Screen ဟာ အလွယ်တကူထိခိုက်မှုတွေရှိလာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဈေးမှာတော့ CPI (Colorless Polyimide) တွေဟာ UTG (Ultra Thin Glass) တွေထက် ပိုသက်သာနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လိုလည်း Galaxy Fold Lite ကို ဈေးပိုသက်သာမယ်လို့ပြောလို့ရတာပါ။
ကျန်တဲ့ Galaxy Z Fold3 မှာတော့ UTG ကိုဆက်သုံးပေးလာဖို့ရှိနေပြီ S Pen လည်းပါဝင်လာမယ်လို့ @hwangmh01 ကဖော်ပြထားပါတယ်။ S Pen ပါလာမှာလို့ဈေးကလည်းထောင်တက်လာမယ့်ပုံရှိနေပါတယ်။ ဒီလို S Pen နဲ့သာဆိုရင် ဖုန်းဟာ Samsung ရဲ့ဈေးအကြီးဆုံးဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး Foldable ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Galaxy Z Fold S ကတော့ အတွင်းကော ၊ အပြင် ကောပါခေါက်လို့ရမယ့် ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာမယ်လို့ပဲသိထားရပါသေးတယ်။ ဒီလိုပုံစံအရဆို ဖုန်းဟာ မကြာသေးခင်က TCL ထုတ်ပြခဲ့တဲ့ သုံးဖက်ခေါက်လို့ရတဲ့ Prototype ဖုန်း လိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီသတင်းတွေအရ Foldable Phones အမြောက်အများကို ဈေးကွက်ထဲမှာတွေ့လာရတော့မယ့်ပုံပါပဲ …
Ref : Gizchina
ဈေးနည်းနည်းနဲ့ အကြီးကြီးတွေကိုပေးမယ့် Redmi Note95G Series တရုတ်မှာထွက်ရှိလာ…